CUDURADA IYO CAYAYAANKA EE FICUS BENJAMIN - FICUS BENJAMINA
Ficus benjamina - Tani waa warshad caddaynaysa qoyska dooxada. Dabeecadda, dhirtu waxay gaartaa 25 mitir ee dhererka. Ficus wuxuu uqalmaa jawi diiran oo qoyan - Hindiya, Shiinaha, Koonfur Asiya, Filibiin iyo waqooyiga Australia. Warshadda waxay magaceeda ku heshay sharaf ka mid ah khabiirada Ingiriisiga ah ee Benjamin Jackson.
Xaqiiqo xiiso leh! Magaalada Bangkok, Ficus Benjamin waxaa loo calaamadiyaa sida calaamad u ah magaalada.
Cayayaanka ugu weyn ee ficus Benjamin
Ficus benjamina wuxuu u nugul yahay cayayaanka iyo cudurrada noocaas ah.
Shchitovka. Cayayaanka aan fiicnayni waxay waxyeeleeyaan dhirta oo kaliya maadaama ay cabto cabitaanka ficus, laakiin sidoo kale alaabta waxqabadyada muhiimka ah. On raadinta ka tagay by boqoshaada qoyan kordhiyo. Si loo baabi'iyo duleelka, geedi socodka caleemaha iyo laamaha geedka leh xal gaar ah - Aktely. Fungus waxaa laga saari karaa xalka saabuunta.
Caarada caarada. Waxay ka tagaan raadinta qaniinyada iyo caleemaha caleemaha, ka dib marka caleemuhu ay u engegaan iyo dhacaan. Iyadoo shilinta ayaa la halgamaya xalka difaaca - Fitoverm, Aktity iyo Sunmite.
Thrips. Ku saabsan muuqaalka kaneecadaasi waxay ku wargelinaysaa huurada cad oo muuqata caleemaha ficus. Dhinaca dhinaca dambe ee caleemaha, cayayaanka jiifay ukunta, sidaa darteed warshadda waa in si ku meel gaar ah looga saaro marinka kale. Thrips waxaa lagu dilaa sunta cayayaanka, sida Aktara iyo Mospilan.
Aphid Nasiib-darrada noocan ah ayaa sidoo kale nibbles caleemaha iyo laysugu dhejiyaa dhinacyada hoose ee ukunta. Insecticides sidoo kale waxay ka caawin doontaa in laga takhaluso aphids on ficus Benjamin.
Mealybug On ficus ah dulin ah degay on geedka oo dhan. Waxay ubaahan tahay in lagu riixo dusha sare ee burushka, ka dibna ku daadi geedka. U hubso in aad kormeertid dheriyada ku xiga. Ka dib markii geedi socodka "qubayska" ficus Aktell. Waxaa lagugula talinayaa inaad ku celcelisid qalliinka saddex maalmood ka dib.
Calaamadaha cudurka ficus
Calaamadaha ugu muhiimsan ee ficus cudurku markiiba dareenka ayuu isu soo jeediyaa. Tan iyo dhirta ay tahay mid jilicsan, xoog waxyeello leh ama daryeel aan ku filneyn ayaa isla markiiba saameyn doona muuqaalkeeda waxayna keenaysaa cudurro.
Ma taqaanaa? Si aad u bixiso ficus arag sawir ah, dhirta dhowr caleemo wada, oo iyaga ku qurxin jar. Markay koraan, dogobka ayaa koraan oo u beddelaan koritaan xiiso leh.
Naqshadaha, isbeddel deg-deg ah oo heerkul ah, waraabiyo biyo qabow iyo iftiin la'aantu waxay horseedi doontaa duufaan iyo caleemaha ka dhacaya. Qoyaan la'aanta iyo hawo kulul ayaa sababa qorraxda caleemaha si ay u qalalaan. Tani waxay sidoo kale muujin kartaa dhiigbaxa.
Ku saabsan la'aanta bacriminta dhirta daciif ah, caleemaha kuwaas oo si tartiib ah u koraya. Waxay ka caawin doontaa bacrimin leh content content nitrogen. Dareemidda waxaa loo yaqaan 'dropsy' oo loo yaqaan 'ficus'. Caleemo liidata iyo caleemo waxyeello ayaa muujinaya bacriminta xad dhaafka ah ee nitrogen.
Root kalluunka, iyo sida loo takhaluso
Cudurka ugu xun waxaa loo qaadan karaa kallana yaryar. Cudurka fungal mar walba lama bogsiin. Haddii aad dareentid qolofo leh taabashada ciidda ficus, waxaad u baahan tahay inaad qodo geedka iyo eego xididada. Haddii ay aad u madow yihiin oo jilicsan, dib u noqoshada dhirta ma guulaysan doonto. Haddii xididdadu ay u jilicsan yihiin taabashada iyo iftiinka midabka, sii wad badbaadinta bukaanka. Waa lagama maarmaan:
Ka saar dhammaan xididdada khafiifka ah, iyo sidoo kale caleemaha iyo laamaha oo leh raadadka cudurka.
Haddii taajka ficusku uu yaryahay, waa lagama maarmaan in dhuuban si dhirtu u isticmaasho tamarta oo kaliya in laga takhaluso cudurka.
Dib u celi ficus ee ciidda cusub iyo daaweyn leh xal of fungicide carbendazim.
Ku rid dhirta meel quruxsan, laakiin ma qorraxda.
Maaddaama cudurradu ay sababaan marar badan oo qoyaan ah, daaweyntoodu waxay ku bilaabmeysaa iyada oo la raacayo xeerarka waraabinta. Si aad u ogaato in dhirta ay rabto qoyaan, ka qaado ciidda leh ul oo eeg sida ay u qalalan tahay. Haddii lakabka qoyan yahay qoto dheer oo ah 4 cm, waad ka cabbi kartaa.
Waa muhiim! Benjamin Ficus ma jecla isdifaac si joogta ah, markaa habsocodka waa in la sameeyaa oo kaliya marka xididdadiisa ay bilaabaan inay ka soo baxaan dheriga.
Meel caleen ah, sida loo saaro lebbiska
Dhibaatooyinka caleemaha ficus waxay u muuqdaan inay sabab u yihiin daryeel aan haboonayn, laakiin waxay sidoo kale ka imaan karaan cudurrada sida anthracycnosis iyo cercosporosis.
Dhinaca muuqaalka dhibcaha brown waxay sababi kartaa jirro daran iyo xitaa luminta taajka. Aan arko sababta dhibco madow ay u muuqdaan caleemo ficus ah. Tani waxay sabab u tahay heerkulka sare ee qolka, hawada qalalan iyo waraabinta dambe. Daaweyntu waa sahlan - daryeelka saxda ah iyo dayactirka ficus. Iyo sidoo kale bacarimis, laakiin daaweynta ka dib.
Digniin! U fiirso heerkulka dhexdhexaadka ah meel ay ku jirto ficus. Isagu wuu jecel yahay kulaylka iyo qabowga.
Ciladda geedka caleen
Kalluunta "gray" loo yaqaan "bortritis". Huurkan ayaa u muuqda sababtoo ah waraabin badan oo warshad ah. Meelaha maaddada caleenta ah ee geedka ayaa laga saaraa oo waxaa la yareeyaa soo noqnoqoshada biyaha. Dheriga dheriga waa in la doorbidaa in laga dhigo dhir kale oo kale muddada daaweynta.
Bloom Bloom on go'yada
Bloomka madow ayaa sidoo kale ka dhalan kara qoyaan xad dhaaf ah. Cuntooyinka fangaska ee magaca cilmiga Cercospora waxay keenayaan cudurka. Sidoo kale wuxuu xanuujiyaa fangas sidan oo kale. Daaweyntu waa in laga takhaluso dulin iyo hoos u dhigo waraabka. Taas ka dib, waxaa lagama maarmaan ah in lagu daaweeyo ficus leh xal oo burburiya fungus.
Caleemaha Brown waxay ku bilaabataa muuqaalka kore ee dhibco madow oo madow. Si tartiib ah, waxay u koraan, samaynta boogaha. Caleemaha ayaa dhacaya oo dhirta way dhiman kartaa. Fungi noocan ah ayaa loo yaqaan 'anthracnose'. Ficus anthracnose waxaa lagu daaweeyaa xalka ay ku jirto bakteeriyada. Waqtiga daaweynta, dhirta ka soocaan dheriyo kale. Ku dawee ficus, ka dib marka aad ka saarto caleemaha saameeyeen. Iyada oo ku xiran daroogada aad dooratid, ku celceli daaweynta, iyo inta jeer ee nidaamyada, ogow tilmaamaha xalka.
Xiiso leh Sri Lanka, beerta Boqortooyada "Peradeniya" waxay korodhay 150-sano jir. Meesha taajka ah waa qiyaastii 2.5 mitir oo laba jibbaaran, qaabkeeduna wuxuu u eg yahay dari weyn.
Si looga fogaado jirrooyinka ficuska iyo koritaanka warshad xoogan oo weyn oo ah dayactirka saxda ah iyo daryeelka uu ku caawin doono. Caafimaadkiisu wuxuu ku xiran yahay dareenkaaga.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Ficus benjamina 2019